Barootiinada xayawaanka iyo bay'ada, isku dhaf khatar ah | Cusbooneysiinta Cagaaran
Haddii ay jirto nafaqo loo aaneeyo muruqyada, waa hubaal inay tahay borotiino. Xaqiiqdii, waa qayb muhiim ah oo ka mid ah unugyada muruqyada, kuwaas oo tabarucyadoodu u qalmaan in la hagaajiyo maalin kasta marka shaqsigu xiiseynayo isboortiga, marka ay doonayaan inay miisaanka yareeyaan, ama si fudud u daryeelaan caafimaadka. Miisaan dhaca iyo ku celcelinta a waxqabadka fisikiska dhaqan ahaan waxay keenaan koror ku yimaada baahiyaha aragtida ah.
Sababtani waa mid jir ahaaneed waana mawduuca ugu muhiimsan talooyinka nafaqada. Laakiin haddii aan xoogaa aragti caalami ah ku eegno doorka cuntada, xagga cabirka wadajirka ah, xaaladdu sidaa uma fududa. Runtii, markaan arko isbedelka dadka iyo isbeddelka hadda jira ee dadka adduunka ee ah inay kordhiyaan tabarucaada borotiinka xayawaanka, ugu dambeyntii wuxuu bilaabmayaa inuu abuuro dhibaato.
Iyadoo halkaa saadaasha waxay noo horseedaan in ka badan 9,6 bilyan oo qof oo ku nool meeraha sannadka 2050, dayactirka noocan ah isticmaalka borotiinka xayawaanka runtii waa dhibaato xagga cilmiga deegaanka ah. Marka la eego cabirka bani'aadamnimada, dib u eegis ku samee cunnooyinka borotiino xoolaha lagama maarmaan. Wax soo saarka xooluhu wuxuu kaligiis haystaa 70% dhul beereedka, 40% badarka laga beero adduunka ayaa loogu tala galay inay quudiyaan lo'da dhaqaajisa dhulkan.
Tani waa mid ka mid ah qodobbada lagama maarmaanka u ah dammaanad-qaadista baahidan sii kordheysa ee borotiino xayawaanka. Waa lagama maarmaan in la kordhiyo wax soo saarka dalagga si waxyeello loogu geysto bacriminta ciidda iyo ixtiraamka nidaamka deegaanka. Marka la soo koobo, halka in ka badan 840 milyan oo qof ay ku dhibaateysan yihiin adduunka, iyo 2000 bilyan cilladaha nafaqada, Nidaamka hadda jira wuxuu mudnaanta siinayaa dhalidda tamarta daciifka ah si looga jawaabo baahiyaha sii kordhaya ee borotiinka xayawaanka si waxyeello loogu gaadho xalalka caalamiga ah, nafaqada, deegaanka iyo dhaqaalaha labadaba.
Runtii, waxay kuxirantahay noocyada, kharashka firfircoonaan kaloriinka xoolaha lagu qiyaaso waa qiyaastii 3 ilaa 9 kalooriyada qudaarta. Haddii aan tusaale u soo qaadanno hilib lo’aad oo warshad ahaan loo kiciyey muddo saddex sano ah si loo bixiyo 200 kiilo oo ka mid ah hilib, dibigani wuxuu cuni doonaa 1300 kg oo hadhuudh ah iyo 7200 kg oo calaf ah. Celcelis ahaan, 7 kiilo oo badar ah ayaa lagama maarmaan u ah soo saarida kiilo hilib ah oo ku saabsan dhaqashada xoolaha ee aadka u culus. Kumaa leh beerashada, waxay kaloo sheegtaa isticmaalka biyaha.
La daabacaad biyo Waa halbeeg cabbir ah oo cabiraya kaas oo u oggolaanaya in la qiyaaso biyaha lagama maarmaanka u ah soo saarista cuntada ee dhammaan heerarka, si toos ah iyo si aan toos ahaynba. Intii u dhaxeysay 1996 iyo 2005, biyaha biyaha bini'aadamka ayaa aad u weynaa, 92% tan waxaa loogu talagalay beeraha iyo dhaqashada lo'da. Sida lagu sheegay warbixin ay daabacday 2010-kii hay’ada HIE ee UNESCO, soo saarista hal kiilo oo lo ’ah ayaa u baahan 15.000 litir oo biyo ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Ecology » Beeraha deegaanka » Borotiinada xayawaanka iyo deegaanka, iskudhaf khatar ah
Ilaha tamarta cusub ee aan la aqoon